सबै को लागी आशा - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
जे होस्, भगवान्‌को अद्भुत क्षमा मेरो मनपर्ने विषयहरू मध्ये एक हो, मैले स्वीकार्नुपर्दछ कि यो कत्तिको वास्तविक हो भनेर बुझ्न पनि गाह्रो छ। शुरुदेखि नै, परमेश्वरले यसलाई उनको उदार उपहारको रूपमा योजना गर्नुभयो, उनको छोराले माफी र मेलमिलापको एउटा महँगो कार्य, जसको चरम सीमा क्रूसमा उसको मृत्यु हो। नतिजा स्वरूप, हामी मात्र निर्दोष हुन्छन्, हामी पुनःस्थापित हुन्छौं - "मायामा" लाई माया गरेर ...
मानव दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, परमेश्वरको शक्ति र इच्छा संसारमा अक्सर गलत अर्थ लगाइन्छ। प्राय: व्यक्तिहरू अरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउँछन र आफ्नो इच्छा थोपाउन उनीहरूको शक्ति प्रयोग गर्दछन्। सबै मानिसजातिको लागि क्रसको शक्ति एक अनौंठो र मूर्ख अवधारणा हो। धर्मको धर्मनिरपेक्ष धारणाले इसाईहरूमा सर्वव्यापी प्रभाव पार्न सक्छ र धर्मशास्त्र र सुसमाचारको सन्देशको गलत अर्थ लगाउँदछ। "यो राम्रो छ…
म किन बाँचिरहेछु के मेरो जीवनको कुनै अर्थ छ? म मरे पछि के हुन्छ? सक्कली प्रश्नहरू जुन सबैले पहिले आफैं सोधेको हुन सक्छ। प्रश्नहरू जुन हामी तपाईंलाई यहाँ जवाफ दिन्छौं भनेर एक जवाफ: देखाउनुहोस्, हो, जीवनको एक अर्थ छ; हो, मृत्यु पछि जीवन छ। मृत्यु भन्दा सुरक्षित केही छैन। एक दिन हामीले एउटा डरलाग्दो समाचार पाउँदछौं कि एक प्रियजनको मृत्यु भएको छ। अचानक यो सम्झिन्छ कि हामी पनि मर्नु पर्छ ...
सुसमाचार - शुभ समाचार!
सबैजनासँग सही र गलतको विचार छ, र सबैले पहिले नै केही गलत गरिसकेका छन् - आफ्नै विचार अनुसार। "गल्ती गर्नु मानव हो," एक प्रख्यात भनाइ छ। सबैजनाले कहिल्यै एक साथीलाई निराश पारेको छ, वाचा तोडेको छ, कसैको भावनामा चोट पुर्‍याएको छ। सबैलाई दोषी थाहा छ। त्यसकारण मानिसहरू परमेश्वरसँग केहि गर्न चाहँदैनन्। तिनीहरू न्यायको दिन चाहँदैनन् किनकि उनीहरू जान्दछन् कि उनीहरू शुद्ध छैनन् ...
यसले प्रायः शास्त्रपदलाई ध्यानपूर्वक हेर्न मद्दत गर्दछ। यहूदीहरूका अग्रणी विद्वान् र शासक निकोदेमससँग कुराकानीको दौडान येशूले एउटा प्रभावशाली प्रदर्शनकारी र सबै घटनाको बयान गर्नुभयो। "किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने सबै नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्" (यूहन्ना :3,16:१)। येशू र निकोदेमस एक समान चरण मा भेटियो - शिक्षक देखि ...
येशूको अनुयायी हुनु भनेको के हो? पवित्र आत्माको माध्यमबाट परमेश्वरले येशूमा हामीलाई प्रदान गर्नुभएको मुक्तिको जीवनमा भाग लिनको अर्थ के हो? यसको अर्थ हाम्रो सहि मानवहरूको सेवा गर्न निस्वार्थ सेवा गरेर हाम्रो उदाहरण मार्फत प्रामाणिक वास्तविक जीवन बिताउनु हो। प्रेरित पावल अझ यसो भन्छन्: you के तपाईंलाई थाहा छैन कि तपाईंको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जुन तपाईंभित्र रहेको छ र तपाईं परमेश्वरबाट आउनु भएको छ, र तपाईंले गर्नुहुन्न ...
यो एकदम अचम्मको कुरा हो कि मार्टिन लुथरले आफ्नो साथी फिलिप मेलान्चथनलाई लेखेको पत्रमा उनीलाई यस्तो आग्रह गर्दछन्: पापी बन्नुहोस् र पापलाई शक्तिशाली बनाउनुहोस्, तर पाप भन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ तपाईमाथि विश्वास गर्नु र ख्रीष्टमा रमाउनु कि उहाँ पाप हुनुहुन्छ, मृत्यु र संसारलाई जितेको छ। पहिलो नजर मा, अनुरोध अविश्वसनीय लाग्छ। लुथरको चेतावनी बुझ्न हामीले प्रसंगलाई नजिकबाट हेर्नु पर्छ। लुथरको मतलब पाप होइन ...
बारम्बार पावल रोमीहरूमा तर्क गर्दछन् कि हामी ख्रीष्टको .णी छौं कि परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। यद्यपि हामी कहिलेकाहिँ पाप गर्दछौं, ती पापहरू पुरानो व्यक्तित्वहरूमा गनिन्छन जो ख्रीष्टसँगै क्रूसमा टाँगिएको थियो। हाम्रा पापहरू हामी ख्रीष्टमा भएको कुराको हिसाबले छैन। मुक्ति पाउनु होइन तर पापको विरुद्ध लड्नु हाम्रो कर्तव्य हो किनकि हामी परमेश्वरका बालकहरू हौं। अध्याय the को अन्तिम भागमा ...
यदि तपाइँ केवल एउटा खण्ड छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाइँको सम्पूर्ण इसाई जीवनको संक्षिप्त गर्दछ, कुनचाहिँ हुन सक्छ? सायद यो सबैभन्दा उद्धृत पद: "त्यसोभए परमेश्वर संसारलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू हराउँदैनन्, तर अनन्त जीवन पाउँछन्?" (Jn :3:१:16)। राम्रो विकल्प! मेरो लागि, निम्न पदले बाइबलले समग्रमा बुझ्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ: "त्यस दिन तपाईं ...
रोमी १०: १-१-10,1: सबैका लागि शुभ समाचार
पावल रोमीहरूमा लेख्छन्: "प्रिय भाइहरू र बहिनीहरू, म सम्पूर्ण हृदयले इस्राएलीहरूलाई चाहेको छु र तिनीहरूका लागि परमेश्वरबाट प्रार्थना गर्दछु कि उनीहरूले मुक्ति पाउनेछन्" (रोमी १०: १)। तर त्यहाँ एउटा समस्या थियो: “किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको उद्देश्यको लागि जोस देखाएनन्; म यसको गवाही दिन सक्छु। तिनीहरूमा के कमी छ त्यो सही ज्ञान हो। तिनीहरूले परमेश्वरको धार्मिकता के हो भनेर बुझेका छैनन् र आफ्नै धार्मिकतामा परमेश्वरसामु खडा हुने प्रयास गरे।
मैले तपाईंलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सम्बोधन गरेको छु: गैर-विश्वासीहरूको बारेमा तपाईं कसरी सोच्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ कि यो एक प्रश्न हो जुन हामी सबैले सोच्नु पर्छ! संयुक्त राज्य अमेरिकाको जेल फेलोशिप र ब्रेकपोइन्ट रेडियो कार्यक्रमका संस्थापक चक कोल्सनले एक पटक यस प्रश्नको जवाफ दिए: “यदि अन्धा मान्छेले तपाईंको खुट्टामा पैदल हिर्काउँछ वा तपाईंको शर्टमा तातो कफी राख्छ भने, के तपाईं उहाँसँग रिसाउनुहुनेछ? उनले आफैलाई जवाफ दिए कि हामी सायद यो हुनुहुन्न, बस ...
के तपाईंलाई थाहा छ धेरै इसाईहरू दिनहुँ बाँच्दछन् र परमेश्वर उनीहरूलाई अझै पनि प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा निश्चित छैन? उनीहरू चिन्तित छन् कि परमेश्वरले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुहोला, र त्योभन्दा पनि नराम्रो कुरा कि उहाँ तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाई उस्तै डर हुनुहुन्छ। किन तपाई इसाईहरु चिन्तित छन् भन्ने लाग्छ? यसको उत्तर केवल तिनीहरू आफैंमा इमानदार छन्। तिनीहरू जान्दछन् कि तिनीहरू पापीहरू हुन्। तिनीहरू आफ्नो असफलता, आफ्नो ...
लूकाको सुसमाचारमा हामीले एउटा कथा भेट्टाउँछौं जसमा येशूले आफ्नो हराएको कुनै चीज खोजिरहेको बेला कस्तो हुन्छ भनेर बोल्नुहुन्छ। यो हराएको सिक्काको कथा हो: "वा मानौं कि एउटी महिलासँग दस ड्राक्माहरू थिए र एउटा गुमाए" ड्राक्मा एक ग्रीक सिक्का थियो जुन रोमन दिनारियस वा लगभग बीस फ्रान्कको मूल्य थियो। "के उसले बत्ती बालेर पूरै घर उल्टाउनेछैन जब सम्म ...
त्यहाँ एउटा भनाइ छ, "आशा अन्तिम दिन मर्छ!" यदि यो भनाइ सही हुँदो हो त मृत्यु आशाको अन्त्य हुने थियो। पेन्टेकोस्टको उपदेशमा, पत्रुसले घोषणा गरे कि मृत्युले उहाँलाई पक्रन सक्दैन: "परमेश्वरले उनलाई उठाउनुभयो र उहाँलाई मृत्युबाट पीडित गराउनुभयो, किनकि उसको मृत्युलाई असम्भव थियो" (प्रेरित २) , २))। बप्तिस्माको प्रतीकात्मक अर्थमा चित्रण गरिएका मसीहीहरूले त्यसो गर्दैनन भनेर पावलले पछि वर्णन गरे ...
मलाई दुर्व्यसन लागेको छ भनेर स्वीकार्न मलाई धेरै गाह्रो छ। म आफैंमा र मेरो वरिपरिको जीवनमा झुठो बोलेको छु। यस तरिकाले, म धेरै दुर्व्यसनीहरू भेट्टाए जो मदिरा, कोकेन, हेरोइन, गाँजा, तंबाकू, फेसबुक र अन्य धेरै लागूपदार्थको लागी विभिन्न चीजहरुमा निर्भर छन्। भाग्यवस, एक दिन मैले सत्यको सामना गर्न सकें। म आदी छु। मलाई सहयोग चाहियो! लतको परिणाम सबै मा छन् ...
म बच्चाहरु भएका हामी सबैलाई केहि प्रश्नहरु सोध्छु। "के तपाईंको बच्चाले कहिले तपाईलाई अनाज्ञाकार गरेको छ?" यदि तपाईले हो भने, अरु सबै अभिभावकहरु जस्तै, हामी दोस्रो प्रश्नमा आउँछौं: "के तपाईले आफ्नो बच्चाहरुलाई अनाज्ञाकारिताको निम्ति सजाय दिनु भयो?" सजाय कति दिनसम्म रह्यो? यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा: "के तपाईले आफ्नो बच्चाहरुलाई सजाय समाप्त हुँदैन भनेर बताउनुभयो?" त्यो पागल देखिन्छ, हैन र? हामी जो कमजोर छौं ...
धेरै इसाईहरू यसबारे निश्चित रूपमा चिन्तित हुँदैनन्, के परमेश्वरले तिनीहरूलाई अझै प्रेम गर्नुहुन्छ? उनीहरू चिन्तित छन् कि परमेश्वरले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुहोला, र त्योभन्दा पनि नराम्रो कुरा कि उहाँ तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाई उस्तै डर हुनुहुन्छ। तपाईं किन इसाईहरू चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ? यसको उत्तर केवल तिनीहरू आफैंमा इमानदार छन्। तिनीहरू जान्दछन् कि तिनीहरू पापीहरू हुन्। तिनीहरू आफ्नो असफलता, उनीहरूको गल्तीहरू, आफ्ना ...
पश्चिमी संसारमा क्रिसमस त्यस्तो समय हो जब धेरै मानिसहरू उपहार दिन र ग्रहण गर्न जान्छन्। प्रियजनहरूको लागि उपहार छनौट अक्सर समस्याग्रस्त हुन्छ। धेरै मानिसहरूले धेरै व्यक्तिगत र विशेष उपहारको आनन्द लिन्छन् जुन देखभाल र प्रेमको साथ चयन गरिएको छ वा आफैले बनाएको हो। त्यस्तै गरी, भगवानले अन्तिम पुस्तामा मानवताको लागि आफ्नो टेलर-निर्मित उपहार तयार गर्नुहुन्न ...